Idolobha lase-Evpatoria liyisiphephelo sezilwandle olwandle olusentshonalanga ye-peninsula yaseCrimea, ehambele minyaka yonke izigidi zezivakashi ezivela eRussia nakwezinye izindawo eziseduze. Kule ndawo ugu lolunzulu, ulwandle alujulile, amabhishi anesihlabathi, ngakho-ke, ngenxa yokuthi izikhathi zeSoviet Evpatoria zithuthukile njengendawo yokuvakashela izingane.
Ukwelashwa kweSanatorium no-spa kwezingane e-Evpatoria
Lapha, ogwini lolwandle, kunesibalo esikhulu sezinsiza zezempilo zezingane, amakamu nezindawo zokuzilibazisa.
Umoya ogcwele utshani obusenyakatho kanye nolwandle, imithombo yamaminerali amaningi, izidakamizwa ezihlukile zokuphulukisa yizici eziyinhloko ezidala izimo ezinhle zokuphulukisa izingane eziphethwe izifo ze-musculoskeletal, izifo zamalunga nama-tendon. Isimo sezulu sika-Evpatoria siphulukisa ngokugcwele izifo zezitho zokuphefumula ezinganeni, izifo zesimiso sezinzwa nesifo senhliziyo.
Cishe zonke izikhungo ze-sanatoriums zezingane e-Evpatoria zonyaka wonke, zihlomele imishini yesimanje yezokwelapha kanye nongcweti bokuqala. Izingane ezibuyiselwayo zithola ithuba lokutadisha esikoleni esikoleni.
I-Sanatorium yezingane ezinabazali "Iskra"
Phakathi neminyaka engama-40 yekhulu lokugcina isakhiwo sakhiwe eCrimean Yevpatoria, esiye sasebenza ngempumelelo iminyaka engaphezu kwamashumi ayisikhombisa futhi sinakekela izingane nabazali bazo ukuze baphumule kanye nokwelapha. Kutholakale impilo yezempilo endaweni enokuthula ye-Evpatoria, eduze komgwaqo. Kirov, 91. Ukusuka ehhotela kuze kube olwandle ngamamitha amane kuphela.
I-Sanatorium "Iskra" (i-Evpatoria) iyisikhungo sombuso saseCrimea eRussian Federation, esixhaswe esabelomali. Isiyaluyalu sivulekile unyaka wonke. Bathatha izingane lapha kusukela eneminyaka emihlanu kuya kweyishumi nesikhombisa. Babiza i-Iskra indawo yokuhlenga izingane. Kubantwana abanezingane, futhi, ukwamukela kungenzeka, njengoba lapha bephatha izifo ezinjalo, lapho izingane ezingenakukwazi ukuhlala ngokugcwele ngokuzimela.
I-Sanatorium "Iskra" (i-Evpatoria) ivakashelwe izingane ezinezifo ezinzima, njengokukhubazeka kwezingane, izifo zesimiso sezinzwa, izixhobo zokusekela, izitho ze-ENT nezinye izinkomba. Iphrofayela ye-sanatorium ngaphandle kokuthuthukiswa okujwayelekile yi-psychoneurology.
Lapha izingane zibuyiselwa emuva ngemuva kokudonswa kwe-meningitis, i-poliomyelitis, i-craneocerebral trauma, neuroses neuritis, i-laryngitis, i-bronchitis engapheli, i-asthma ye-bronchial nezinye izifo eziningi eziphathwa ngempumelelo. Ukubuyiselwa okujwayelekile kuhloswe ukukhulisa umkhuhlane, izinqubo zokuvimbela zenziwa.
Naphezu kobudala obukhulu, i-spa "Iskra" (i-Evpatoria) inesisekelo sezokwelapha zanamuhla, nemishini yakamuva yezokwelapha.
Yiqiniso, izici ezibaluleke kakhulu zokuphulukisa yizindawo ezikhangayo zendawo, okukhulunywe ngenhla. Ukushisa ilanga, amanzi olwandle, isihlabathi esifudumele, umoya oyingqayizivele - lena yindlela yokwelapha ephumelela kakhulu, okuthiwa i-climatotherapy. Isidakamizwa sangempela sokuphulukisa imilingo senza izimangaliso, ukuhlanganisa nabo ne-physiotherapy ye-sanatorium kwenza abantwana baphulukiswe. Lesi sici esiyinkimbinkimbi sezinto ezicatshangelwayo sihambisana nokuqeqeshwa ngokomzimba nokwehlisa umzimba, ukudla okunomsoco kanye nemithi.
I-Sanatorium "I-Iskra" (i-Evpatoria) inezinhlayiya zayo zonke izinhlobo ze-physiotherapy apparatus, reflexotherapy, amadivaysi okuxilonga namadivayisi (ultrasound, ECG, ECHO, njll)
Zonke izimpumelelo ezenzekayo zokwelapha - ukukhwabanisa, i-magnetotherapy, i-laser therapy, i-aromatherapy, i-inhalation, ukwelashwa okulula kanye nezinye izinhlobo eziningi zokwelashwa zitholwa esiteshini sempilo.
Isikhungo sisebenzisa izingane, izingane zokwelapha izinkulumo, izazi zengqondo kanye nodokotela bephrofayli emikhakheni ephakeme kakhulu ngomsebenzi omkhulu omkhulu. Iningi elikhulu lezindlela zesimanje ezikhethekile zokwelapha izifo ezihlukahlukene zezingane kanye nokuvuselelwa kuye kwasungulwa.
Indawo yokuhlala amaholide
Sanatorium yezingane Iskra, njenge Kukhulunywe ngenhla, kusebenza unyaka wonke. Ngesikhathi esifanayo, ingahlala abantu abangamakhulu amabili namashumi ayisikhombisa. Amakamelo aklanyelwe ukuhlala kubantu ababili kuya kwabahlanu.
Kukhona amakamelo anezindawo ezabelwana ngazo phansi - zingabantwana ngaphandle kwabazali.
Abazali abanezingane bahlala emakamelweni aphindwe kabili ngeshazi neyasese endlini.
Amacala abantwana nabazali ahlukene.
Lesi sakhiwo sinamabhilidi ayisithupha nendawo ezimbili yokuhlala. Bonke bahlomele ukuhlolwa kwevidiyo, umlilo kanye ne-alamu. Isakhiwo ngasinye sinamanzi ashisayo, ashisa.
Amanani okuhlala nokuphathwa
I-Sanatorium "Iskra" (i-Evpatoria), amanani okuhlala, ukwelashwa okuphelele kanye nokudla okunomsoco inikeza okulandelayo:
Amakamelo anezinsiza (isikhathi sasehlobo) - kusuka ku-1270 kuya ku-1350 ruble ngosuku;
Amakamelo anezikhungo zangasese (ngaphandle kwesizini) - kusuka ku-1170 kuya ku-1250 ruble ngosuku;
Amakamelo kubantwana abanezikhungo ezabelwana ngazo phansi - ruble 1000 ngosuku.
Indawo yokuhlala ekwazi ukudla, kodwa ngaphandle kokwelashwa. Isibonelo, ukubeka izingane emakamelweni ngaphandle kwezinsiza kuleli cala kuyodla kusuka kuma-ruble angu-800 kuya ku-850, abantu abadala emakamelweni abanokuzitholela ngaphandle kokwelashwa - kusuka ku-ruble engu-950 kuya ku-1050.
Izaphulelo zokuthi "unina nomntwana" ezinganeni ezine-cerebral palsy zivela kuma-rubra angu-2500 kuya ku-2700 ngosuku ngosuku ezimbili.
Zonke izinkambo zihlanganisa ukudla okuyisihlanu ngosuku.
Insimu yinkimbinkimbi yesimo sankulu kakhulu futhi inhle kakhulu. Izakhiwo ze-sanatorium zisezindaweni zepaki, indawo engaphezu kwamahektha amabili. Emaphandleni kukhona izihlahla eziningi eziqhamukayo nezikhanda, imibhede yemifula, ama-alleys, amabhentshi kanye ne-gazebos.
Ensimini lapho kunezizathu zemidlalo yezemidlalo ehlukahlukene. Kukhona inkundla yebhola, izindawo zokudlala ezinemijondolo kanye ne-carousels.
I-Sanatorium yezingane ezinabazali "i-Iskra" inesihlwama sayo esinezinhlanzi ezinesihlabathi. Ibhishi linakho konke okudingayo - ama-sun loungers, izindlu zangasese, amakamelo okuzulazula, izambulela, isikhungo sezokwelapha kanye nesiteshi sokulondoloza.
Emkhakheni we-sanatorium complex kuneqembu lapho kukhona khona imicimbi yamasiko ehlukahlukene - imidlalo, i-skits, yaseshashalazini, i-KVN, njll. Iqembu linomtapo wezincwadi, igumbi lomculo, i-cinema, amahholo okudlala.
Idolobha lase-Evpatoria licebile ezintweni, ngakho-ke abantwana ngeke babe nesithukuthezi. Kuzo, ukuvakasha kuhlelwe nxazonke nendawo edolobheni.
Ingabe izivakashi zanelisekile ngendawo yokuhlala kanye nokwelapha nokuthi yini ngempela i-Iskra ye-sanat (Yevpatoria)? Impendulo evela kubavakashi izosisiza ukuba siqonde lokhu.
Ukubuyekeza mayelana nalesi sikhungo kwakunzima kakhulu ukuthola. Abathandi bale ndawo bahlele amaqembu aphelele kumanethiwekhi omphakathi nezinkundla. Lokhu kubonisa ukuthandwa kwesimiso sempilo.
Izivakashi zinkimbinkimbi zempilo zibonisa ukubonga kwabo kwabasebenzi ngokuziqaphela kwamakhasimende, amakhono obuchwepheshe nokuphendula. Futhi udumise wonke umuntu - othisha, odokotela, abapheki, abasebenzi abalandela ukuhlanzeka, abalindi nabahlengikazi.
Kusukela ekubuyekezweni kwabaholi bamaholide singaphetha ngokuthi abasebenzi bezemidlalo yiqembu labaqeqeshi abathanda umsebenzi wabo, futhi njengoba wonke umuntu eyazi, ama-cadres anqume konke!
Ekubukezweni ngalunye, kukhulunywa mayelana nesisekelo esihle sezokwelapha se-sanatorium, mayelana nokusetshenziswa kwezindlela zomuntu ngamunye zokwelapha nokuvuselelwa, okuletha imiphumela emihle.
Izingane ezinokuphumula e-sanatorium, ngaphezu kokwelashwa, isikhathi esithakazelisayo kakhulu esichithwa hhayi kuphela ehlobo, kodwa nangesikhathi esingaphandle. Zonke izinhlobo zemincintiswano zahlelwa esiteshini, umculo, ezemidlalo nokudansa. Izingane zithathwe ekuhambeni nasekuhambeni.
Uma bekukhona ukuphawula okuncane, abasebenzi abakhulu ngokubambisana kwabo bavelele zonke izinkinga.
Kuhle ukuthi kunezindawo ezweni lethu lapho ungakwazi ukuphumula ngokugcwele izingane, kodwa futhi uthole ukwelashwa okunjalo okudingekayo.